2011 Statistics paKutsvaga Kushambadzira uye Yemagariro Midhiya
Mangwanani ano, ndiri kuverenga eConsultancy Nyika Yekutsvaga Kushambadzira Chirevo chegore ra2011. Iyo State yeKutsvaga Kushambadzira Rondedzero 2011, yakaburitswa neEconsultancy mukubatana ne SEMPO, Inotarisa zvakadzama mashandisiro anoita makambani mashandisirwo akabhadharwa, kutsvaga kweinjini (yekutsvaga) uye kushambadzira kwemagariro.
Chirevo ichi, icho chine zvakare kukosha kwemusika, chinotevera ongororo yevanopfuura mazana mapfumbamwe vakapindura kubva kumakambani ese (vatengi-vevashambadzi) nemasangano, uye yakavakirwa pane data kubva kunyika makumi matanhatu neshanu dzakatorwa muna Kukadzi naMarch 900.
Zvakawanikwa zvinovhara mari, matambudziko aripo, mashandisirwo enjini dzekutsvaga uye mafambiro ari kubuda mukutsvaga kwakabhadharwa, SEO uye vezvenhau. Chidzidzo, SEMPO chechitanhatu cheGore reKutsvaga Rondedzero, zvakare ine yegore-pagore mafambiro uye kubuda kwekambani nerevhizheni zvakawanikwa muchikamu chega chega.
Mukuverenga kuburikidza negwaro, shanduko imwe chete hombe yandakawana yaive shanduko inoshamisa yebhajeti kubva kudhinda kuenda kunotsvaga kushambadzira uye / kana mapurogiramu enhau. Vanopfuura hafu yekambani vakapindura (53%) vari kuchinja mabhajeti kubva kuprinta! Direct mail uye terevhizheni kushambadzira nzira yekudhinda asi zvinokanganiswa futi.
Kunze kwekutsvaga uye zvemagariro, iyo imwe svikiro iri kuwana kutarisisa kwakawanda kubva kuongororo inofamba. Ive neshuwa yekuisa maoko ako pane uyu mushumo - ndeimwe yeakanyanya kutsanangurwa mishumo yandakaona mune imwe nguva padanho rekutsvaga kwekushambadzira indasitiri - kunyanya zvine chekuita neshanduko mune mamwe masvikiro nemikana.
Tags: 2011econsultancydhindaTsvaga Kutengesakuchinja bhajetiSocial Media Marketing
GrabaChat Inotora Kumba Kumusoro Ekuremekedza paKutanga Kwevhiki
Emailvisionvision Inoenderera Mberi ne SmartFOCUS